यो घटनाबाट पाठ सिकौं ! बरु ४ वटा ब्लाङ्गकेट ओढेर सुतौं तर घरभित्र यी गल्ति कहिलै नगरौं। आफु पनि सचेत रहौं र अरुलाई पनि सचेत राखौं।
काठमाडौँ — दामनको पानोरमा रिसोर्टमा आठ ज नाको मृ त्युको कारक ग्यास हिटरको वि षाक्त ताले भएको खुलेको छ । बन्द कोठामा ग्यास हिटर बाल्दा हावा भित्र–बाहिर हुन नपाई ‘कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तता’ ले भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको हो । ‘थप स्पष्ट हुन हामी ‘अटोप्सी (शव परीक्षा)’ रिपोर्टलाई पर्खंदै छौं,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले भने, ‘अटोप्सीमा मृ त्यु हुने कारण वा मृ त्यु कसरी भयो भन्ने कुरा खोजिन्छ ।’
दामनबाट हेलिकप्टरमा मंगलबार बिहान उपचारार्थ राजधानी ल्याइएका ती आठ जनाबारे ‘हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी’ (ह्याम्स) ले भनेको छ, ‘अस्पताल आउँदा कुनै पनि व्यक्तिमा जीवनको लक्षण थिएन, उनीहरूलाई मृ त घो षित गरियो ।’
प्रहरीका अनुसार दामनमा बास बसेको ठाउँ न्यानो पार्न उनीहरूले ग्यास हिटर बालेको कोठामा हावा ओहोरदोहोर हुने भेन्टिलेसन थिएन ।
मुलुकमा बर्सेनि जाडोयाममा घर तताउन हिटर, ग्यास हिटर, आगो बाल्नेलगायतका विभिन्न प्रक्रिया अपनाउँदा र नुहाउने क्रममा ग्यास गिजरको प्रयोग गर्नाले बिरामी पर्ने, मृ त्यु हुने घटना बढेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा प्रतापनारायण प्रसाद सुत्ने ठाउँमा अक्सिजनको मात्रा मान्छेलाई आवश्यक परिमाणमा हावा ओहोरदोहोर भए मात्रै प्राप्त हुन्छ । हुन सकेन भने मान्छे निसास्सिनु स्वाभाविक हो ।
‘हावा ओहोरदोहोर नहुने कोठामा ग्यास हिटर वा आगोले तताउँदा भित्र बसेकाहरूको कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तताले मृ त्यु हुन सक्ने उच्च सम्भावना रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोठा न्यानो पार्नेहरूले हावा राम्ररी ओहोरदोहोर हुने अवस्था छ कि छैन भनेर सतर्क हुनै पर्छ । नत्र दुर्घटनामा परिन्छ ।’
होटलमा थिएन एसी
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रस्थित सिमभन्ज्याङ हेटौंडाबाट ५५ किमि र काठमाडौंबाट ७५ किमिको दूरीमा छ । गुराँस फुल्ने र हिउँदमा हिमपात पनि हुने यो क्षेत्र पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित छ । यहाँबाट मौसम सफा रहँदा १४ वटा अग्ला हिमालमध्ये आठ वटाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । कात्तिकदेखि फागुनको पहिलो सातासम्म निकै चिसो हुनुका साथै चिसो सिरेटो चल्छ । उक्त क्षेत्रमा रहेका अधिकांश होटलमा एसीको व्यवस्था छैन ।
पर्यटकको आगमन दर हेर्दै दुई दशकअघि खोलिएको एभरेस्ट पानोरामा रिसोर्ट पछिल्लोपटक पूर्वाधार थप्दै स्तरीकरण गरिएको हो । रिसोर्टमा खानका लागि राम्रो रेस्टुरेन्ट र बस्न सफा–चिटिक्कका कोठा छन् । तर, रिसोर्टले कोठाहरूमा एसी राखेको छैन ।
मंगलबार भएको घ टनाको कारक कोठामा एसी नहुनुलाई मनिएको छ । कोठामा एसी नभएकै कारण पाहुनाले ग्यास हिटर लगेका थिए । आवश्यकताअनुसार कोठाहरूमा भेन्टिलेटर पनि नहुनुलाई होटल व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने प्रहरीले पनि जनाएको छ ।
‘धेरै–धेरै लागतमा खुलेका होटलले पनि एसी राख्न ध्यान नदिनुको नतिजा यति नराम्रो घटनाका रूपमा आयो,’ थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्टले भने, ‘यो दुःखद घटनाबाट यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले पाठ सिक्नुपर्छ ।’
किन जान सक्छ ज्यान ?
आजभोली देशभर अत्यधिक चिसो बढेको छ। चिसो भएपछि धेरैले कोठाभित्र दाउरा, कोइला तथा हिटरबाल्ने गरेका छन् । देशका पहाडी जिल्ला जहाँ दाउरा सहजै उपलब्ध हुन्छा त्यहाँ समेत यसैगरी न्यायो पार्ने चलन छ । काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरमा पनि दाउरा, कोइला, बिग्रेट, विद्युतीय सामग्री बाल्ने र ताप्ने गरिन्छ ।
तर शरीर न्यानो पार्न ताप्ने आगोले आगलागीसँगै ज्या न जा ने सम्मका जोखिम निम्त्याउने गरेको छ । खुला ठाउँमा बालेको आगो ताप्दा सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । दम, निमोनिया, आँखामा समेत समस्या देखिने डाक्टर विवेककुमार लाल बताउनु हुन्छ । तर झ्याल तथा हावा खेल्ने ठाउँ नभएको अवस्थामा कुनै लक्षणबिना नै ज्या न जा न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने डाक्टरको सुझाव छ।
न्यानो बनाउन बालिने दाउरा, कोइलाको आगो, हिटर लगायतले बन्द कोठामा अक्सिजनको ठाउँमा कार्बनमोनोअक्साइड ग्यास उत्पन्न गर्छ ।
श्वासप्रश्वास प्रक्रियाका लागि अक्सिजन चाहिन्छ भने आगो बल्न पनि अक्सिजन नभै हुँदैन । नयाँ हावा छिर्ने ठाउँ नभएपछि अक्सिजन अभाव हुँदा ज्या न जाने सम्भावना हुन्छ । कार्बनमोनोअक्साइड हेमोग्लोबिनमा अक्सिजनभन्दा दुई सय गुणा बढी टाँसिन्छ र अक्सिजनलाई विस्थापित गर्छ । शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन नहुँदा नियन्त्रण गुम्छ, होस गुमाउँदै गएर ज्यान जाने सम्भावना हुने डाक्टरको भनाइ छ ।
कार्बनमोनोअक्साइडको छिटो र बढी असर मुटुका रोगी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी तथा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पर्छ । त्यसैले अरु बेला पनि कोठामा चिम्नी वा भेन्टिलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामान्य लक्षण टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, शरीर थाकेजस्तो हुने, वाकवाकी वा चिटचिट हुने समस्या देखिए तत्काल डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ । अझ चिसोमा आगो बाल्दा वा विद्युतीय सामग्रीबाट तातो बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
बन्द कोठामा दाउरा, कोइला, हिटर बालेर सुत्नु हुँदैन
नुहाउने कोठामा झ्याल खुला राख्नुपर्छ
ग्याँस गिजर सकेसम्म बाथरुम बाहिर राख्नुपर्छ
बाक्ला कपडा, तातो झोलिलो खानेकुरा खाएर शरीर न्यानो बनाउन सकिने डाक्टर विवेककुमार लालको सल्लाह छ ।
प्रकाशित मिति January 22, 2020